high-frequency ကို induction အပူစက်များ, high-အကြိမ်ရေသတ္တုပြုလုပ်ခြင်းစက်များ, high-အကြိမ်ရေစက်များ | PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.
high-ER ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် (32/900)
high-ER ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် (45/900)
high-ER ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် (64/900)
high-EST ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် (32/1800)
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် (150 ~ 250KHz)
အလတ်စားအဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် (50KW)
အလတ်စားအဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် (35KW)
35KW အလတ်စားအဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက်တစ် TYPE
HP-Cube 35kw A-type ကို
35KW အလတ်စားအဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် B ကို TYPE
အလတ်စားအဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် (25KW)
25KW အလတ်စားအဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက်တစ် TYPE
HP-Cube 25kw A-type ကို
25KW အလတ်စားအဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် B ကို TYPE
အလတ်စားအဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် (15KW)
15KW အလတ်စားအဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက်တစ် TYPE
HP-Cube 15kw A-type ကို
15KW အလတ်စားအဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် B ကို TYPE
အလတ်စားကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် (30-50KHz)
Power Controller တွေ
Power Cube လုပ် SA / 80 စီးရီး
အဆိုပါ 25/50/75/100 kW အစိမ်းရောင် Generators
ဗွီဒီယိုနှင့် Catalogအွန်လိုင်းဗီဒီယိုနှင့် Catalog
high-frequency ကို induction အပူစက်များ, high-အကြိမ်ရေသတ္တုပြုလုပ်ခြင်းစက်များ, high-အကြိမ်ရေစက်များ
အစာရှောင်ခြင်းအပူကိုချက်ချင်းအတင်းအဓမ္မသံပစ္စည်းခိုင်မာစေချအအေး။ ခိုင်မာစေအလွှာ၏အထူပိုမိုမြင့်မားသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းကြောင်းအရာအားဖြင့်ကြိမ်နှုန်းအပူပေးစက်ဆန့်ကျင်သည်။ ဒါဟာအလတ်စားကြိမ်နှုန်း, အလတ်စားအဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်း, အမြင့်ကြိမ်နှုန်း, High-ER အကြိမ်ရေအတွက်ကိုအတည်ပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်။
Tube မှအဝတ်အစားအစမ်းဝတ်၏ Brazing
အစာရှောင်ခြင်းအပူအောက်မှာဂဟေအပိုင်းပိုင်းပေါ်တွင်စက်ဝိုင်းကွိုင်ဝါယာကြိုးဂဟေပစ္စည်းကို ယူ. အပူချိန် controller ကိုများအတွက်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အာရုံခံကိရိယာတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲ။ ဒါဟာအလိုအလျှောက်စက်ပစ္စည်းတောင်းဆိုချက်အတွက်အဆင်သင့်ရလိမ့်မယ်။ လိုအပ်သောလုပ်သားများကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်
လူမီနီယမ်ပစ္စည်း brazing ပိုပြီးအခက်အခဲများထဲမှမျိုးဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းတူညီတဲ့အပူချိန်အမြဲပစ္စည်းစောင့်ရှောက်နိုင်အာရုံခံအရာ၏အပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့တပ်ဆင်။ ဒါဟာတူညီတဲ့အပူချိန်အောက်မှာယင်းအပိုင်းအစရဲ့ပစပ်ဟဖို့စီးသောဂဟေပစ္စည်းလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ကြောင်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာသိပ်အစာရှောင်ခြင်းအမြင့်ကြိမ်နှုန်းအပူပေးစက်များကအပူလွန်ကဲခြင်းကိုခန္ဓာကိုယ်မှရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
Tools များ Brazing
တိကျစိတျအပိုငျး, ဒါမှမဟုတ်အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ annealing ဖြစ်, သို့မဟုတ်နှင့် T-A / C အကြံပေးချက်များအပူအုပ်ဖြစ်ရမည်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အပူအမြန်ဆုံးပြီးအလွန်သေးငယ်တဲ့ဧရိယာလိုအပ်နေသည်ဟု tools များ '' အပူသည်။
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း inductive အပူပေးစက်မဆိုသတ္တုအပူအဘို့သင့်လျော်သည်။ ထိုသို့သောပိုမိုမြင့်မားကြိမ်နှုန်းမြင့်မားအကြိမ်ရေ, အလယ်အလတ်အဆင့်မြင့်အကြိမ်ရေနှင့်အလတ်စားအကြိမ်ရေ induction အပူပေးစက်အဖြစ်အကြိမ်ရေ, ကွဲပြားလျက်ရှိသည်ကွဲပြားခြားနားသောလျှောက်လွှာပေါ် မူတည်. ဖြစ်ပါတယ်။
embedded အထူး-ရည်ရွယ်ချက် microprocessor နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဆော့ဖျဝဲနှင့်တကွ, မြင့်မားသောစွမ်းအင်ကိုကူးပြောင်းထိရောက်မှုပိုထက် 96% အောင်မြင်ရန်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကို၏နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်း,
တစ်ခုကထိရောက် High-er အကြိမ်ရေ induction အပူပေးစက်မပါအကျိုးသက်ရောက်မူရင်းအရည်အသွေးနှင့်အတွင်းပိုင်းပလပ်စတစ်ပစ္စည်းအလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့် mini အရွယ်အစားဧရိယာမှာအပူ။ အဆိုပါတင်ဂဟေဝါယာကြိုးအော်တိုလမ်းခွဲတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဂဟေများအတွက် Sola ဆဲလ်
အဆိုပါအပြည့်အဝအော်တိုအပြောင်းအလဲနဲ့အမြင့်ဆုံးထိရောက်ကိုရည်ညွှန်းအပူချိန် controller ကိုအတူတည်ငြိမ်, တိကျ brazing သည့်စနစ်အောက်တွင်ဖြစ်သင့်သည်။
high frequency ကိုဂဟေဆော်စက်စက်တွေ welding လျှပ်စစ်သံနှင့်ခုခံအများစုကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်